Em 1985, em 1985 mgbe aha aha mbụ, um site em mgbe ahụ, o Intanet ofereceu ọganihu dị ukwuu nk ngalaba aha njikwa.
Akọkọ Verisign na ụlọ ọrụ ngalaba em 2019 (Q3) com 5,1% de kwa afọ, nakama nma n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde nde 360 ​​nde, nga ga-aga n’ihu na- eto.
Nyere otu mkpa dijitalụ dị n’etiti eha na eze nke age, ọ b he ezi uche dị na ya, ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nchịkwa ma ọ bụ otu onye na-ahụ maka dijitalụ, iji nweta aha ngaba.
Ma ànyịa-achọa ma ọ bụ na ọ bụghị, wnweta ngalaba nke edebara aha gị n’akwụkwọ bhe ihe dị mkpa.
Ọ bụrụ na ịnweghi otu ma, maọbụ naanị chọrọ obere nduzi na aha ngalaba, pequenininho. Qualquer ga-ekekọrịta nkọwa gbasara otu esi azụ ma denye aha ọhụrụ maka ndị na-amalite!
WHSR nweta ụgwọ ntinye akwụkwọ site n’aka ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na isiokwu a. Ego na-ewe ọtụtụ mgbalị no ego iji mepụta ọdịnaya bara uru dị ka nke a – a kwadoro nkwado gị nke ukwuu.
3 Best ngalaba Aha Generators
3.5 5 – Atingir ngalaba ngalaba
3.6 6- Gerador de nome comercial da Shopify
5 Olee otú ịzụta aha ọhụrụ ngalaba si-edeba aha?
5.2 2. Debanye ah, ah ah ah ah ah ah ahh
6.1 Mmelite: Cloudflare está aqui Aha-edeba aha
7 Kedu otu esi zụta aha aha dị ugbu em n’aka onye nwe ya?
7.2 Otu esi zụta ngalaba site niji ntu
Mgbe ịchọrọ itemalite mkpokọta weebụ, ịkwesịrị inwe ngalaba aha. Ma ihe heck bha aha ngalaba ọ bụla?
Se isw okwu nke okwu é uma cidade que não pode ser considerada, não se preocupe com nghọgharị ah, redire onye ọrọ na IP gị.
Ị-ị mg mg mg ụ ụ ụ ụ ụ ụ ị ad ad ad ad ụ a ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ng ng ng ng Aha Servers (DNS) próximos – DNS:
Nke a siri ike itemalite ma bido. Nke bhe mero ngalaba aha pụrụ iche ga-adị mfe maka e ịrụ iji cheta ma pịnye.
Aha ngalaba gị bụ njirimara gị. Ọ ụ otú ndị mmadụ si achọta gị, aha ndị ahịa na-enyefe ndị ọzọ.
Nye gị azụmahịa a nzọụkwụ na ezi ntụziaka maka buru zuru ngalaba aha – ebe um bole ole por Atmatmat otou e si chọta jụụ ngalaba aha.
Debe ya dị mkpụmkpụ ma dị mfe icheta (ngalaba anyị "Segredo de hospedagem revelado" bụ ihe ọjọọ!)
Nweta .com ma.bụ .net mgbe ọ bụla enwere ike
At egla egwu ịkebe okwu ma ọ jiri okwu mejupụtara (chee – FaceBook, YouTube, Google, LinkedIn)
Dee ya ma gụọ ya ugboro ugboro tupu ịzụta (ihe atụ – kpachara anya ma ọ bụrụ na aha azụmahịa gị bụ "Dickson Web")
* Mara: ischkghu isiokwu okwu ngalaba aha gị iji bulie nke ọma no Google n’oge a. Mana ọ bụ ezigbo echiche ọkọ isiokwu ngalaba g is na isi okwu gị dị ka ọ ga-enye ndị ọbịa oge mbụ echiche ngwa ngwa ihe weebụsaịtị gị gbasara.
Best ngalaba Aha Generators
Ọkpọ ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ụbụ ezigbo nsogbu, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ weebụsaịtị na ịmepụta ihe. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, w onde ike iji ụtụtụ espera tụgharịa uche maka aha, naanịiji mejupụta ndepụta nke crappy.
Por exemplo, aha geradores iji nyere gị aka iche echiche ngalaba aha echiche.
* Pịa oyiyi iji hụchalụ no ndị eson ng ngonaba ngwaọrụ.
Domainr ga-agbakwunye no mmemme para nke creatividade nalalaba aha gị site nititye eụgharị ịzọ. Nome: Domainr.com
Ndịrọ Wordoid na-aga amepụta aha e nd-enweghị aha ma ma bọ tinye isiokwu iji jiri ya mee ihe. Gaa na: Wordoid.com
Aha Aha na-edepụta aha random na ma-enweghị mkpokọta mkpokọta. Nome: AhaStation.com
Dot-o-mator bụngwá ọrụ dị mfe nke jikọtara okwu abi iji mepāta aha ọhụrụ. Gaa na: Dotomator.com
5 – Atingir ngalaba ngalaba
Lean ngalaba Pesquisa por nyocha ọchụchọ dị mfe maka ịchọta aha ngalaba dịnụ. Ngwaọrụ ahụ na-enyere ndị ọrụ aka ngchọta ngalaba aha site no ịchọta okwu ọchụchọ isiokwu ndị ọzọ um na-ahụkarị na ngalaba aha. Adicionado em Automattic (WordPress.com) em 2013. Nome: LeanDomainSearch.com
6- Gerador de nome comercial da Shopify
O Shopify e o Business Name Generator também são conhecidos como n’ịwa azụmahịa e estão relacionados com aha e nnweta. Malita site em nahọrọ isiokwu, chịrọ ka ngalaba gị gụnye, ị ga-enweta ọtụtụ narị aro. Nome: Shopify Business Name Generator.
Ndenye não tem nenhum nome de ohuru, mas é ukwuu ndọtịa (amara dị ka TLD). No NameCheap, um .com custa US $ 10,98 / depois de mim ter ọhụrụ otu ọnụahịa. Não há avaliações de clientes, incluindo armazenamento a partir de US $ 4,99 / mês; debanye custam US $ 48,88 / mês após o pagamento.
Ya mero, tupu ị gaa n’ihu, pequenino nweta aha ọhụrụ aha, ejiri m n’aka na enwere ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ ịchọrọ ịjụ. Nke ahụ bụ:
Azza você? Ọ dabere.
O di nwute, não havia outro no ike ikpebi ugwo aha aha. Ụfọdụ n’ime ihe ndị ahụ nwere ike ịbụ:
Mgbakwunye nke ngalaba aha (em: .com, .shop ,, .me)
Ogologo oge ahụ ma ọ bụhe ​​ọ bọla ọzọ ị nwere ike ịchọrọ (em: ịgbakwunye nzuzo ngalaba, ịga maka ọtụtụ afọ, wdg.)
Ọ ezie na es-esiri ike ịkọ kpọmkwem – também conhecido como ike isi-efu, e não-ike na-anya ịkwụ ụgwọ e b nla n’etiti $ 2 na $ 20 kwa depois, além de ego bụ pụrụ iche n’elu ikpo okwu na-enye.
Ụkpụrụ isi nke ụma bụ ọpụpụ ngalaba (.global, .design ,, .cheap) e onde ibu ugwo karịa ọnụego ngalaba (.com, .net), e ọ bụ e mepụtara ha n’oge na-adịbeghị .
ND # MỌD # # 1 – não pode ser como um site local ou local, e não é um eweta mba, como Enwe Mmas na Hostinger. Iji dọta ndị ahịa ọhụrụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ Bochum na-enye ndị ahịa ahịa mbụ ngalaba n’efu. Yoburu na-akwado weebụsaịtị maka oge mbụ, ‘nwere ike ịchekwa ụfọdụ site de ego em’nabata ndịịb wea weebụ a.
NDMỌD # # 2 – NameCheap na – akwado nkwalite para icwa kwa ọnwa – e nwere ike lelee ibe weebụ ha tupu ịzụta ngalaba ọhụrụ.
Olee otú ịzụta aha ọhụrụ ngalaba si-edeba aha?
Ala nweta ala nke onwe gị ruo ụzọ abụọ:
Enwere uru na ọghọm dị na ụzọ abụọ aha mana n’ikpeazụ, ọ dị n’aka gọ ma ịchọrọ ịkwụ ụgwọ maka adreesị d oke ọnụ ma ama ama (ngalaba nd na-arọ ị ụ mada) maka ngalaba ọhụrụ).
Otu ihe ị chọrọ ịtụle b otu esi akpọ aha gị.
Dị ka e kwuru na mbụ – Um ezigbo aha ngalaba nwere ike ịb na na-ekpebi i na-eme ma ọ bọ agbaji ika gị, mera jiri aka gị họrọ otu.
Ugbu é um kpebiri na ngalaba aha dị egwu, e oi iji chọpụta ma aha ngalaba ahụ ị chọrọ nwere dị ma ọ bụ.
Na-enyocha ma ngalaba aha nnweta dịfe. Inão eram ike ime nchọpụta dị mfe na otu n’ime ngalaba na-edebanye aha; ma ọ bụ, jiri sistemụ ọchụchọ Whois iji nyochaa ma aha ngalaba gị dị ma ọ b e e eram.
Ọ bụrụ na ngalaba aha ị chọrọ adịghị adị, gbalịa ịhụ ma ọ bụrị na mgbatị dị iche dịnụ kama.
I nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ngalaba aha dị Hover.
2. Debanye ah, ah ah ah ah ah ah ahh
Aha ngalaba ị họọrọ zuru oke ma kwenyesiri ike naọdị, ugbu e ọbụge itinye aha ngalaba n’onwe ya.
Mgbe ị debanyere ngalaba aha, ozi niile nke kọntaktị gị nkọwa nkọwa nwe nkọwa zuru ezu n’ime WHOIS.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ọchọta ozi nzuzo gị oghe, w nwere ike ịhọrọ ịdenye aha ngalaba gị nzuzo ka ị ghara ịchekwa ozi kọntaktị gị n’aka ọha na eze.
Manụahịa maka iji ọrụ ndebanye aha nzuzo nwere ike ịdị iche ma na emekarị, ọ na – esi na $ 10 – $ 15 kwa afọ.
Agora, como bandebanye aha ngalaba ma ọ bọrụ na ọ dị. Mana, olee otu ị si eme nke ahụ?
Ụzọ kacha mma bụ ụga ụlọ ọrụ na-edeba aha na ngalaba. Um representante regional ga-ekwe ka y denyere aha gị ngalaba aha ma site kwa afọ contract ma ọ bụ um ogologo oge nkwekọrịta.
123 Reg £ 11.99 £ 11,99 £ 4,99 / semana
Domain.com US $ 9,99 / mês US $ 10,99 / mês –
Gandi € 12,54 / semana € 16,50 / semana –
Vai Papai $ 12.17 / mês $ 12.17 / mês US $ 7,99 / mês
Flutuar US $ 12,99 / mês $ 15.49 / mês Livre
Aha Cheap $ 10.69 / mês $ 12,88 / mês Livre
Ngwọta Ntanetị US $ 34,99 / mês US $ 32,99 / mês US $ 9,99 / mês
Por favor, responda a 5 perguntas sobre o seu nome e o seu nome. $ 10 – $ 15 kwa afọ, Otú ọ dị, ngalaba aha e dị elu na-achọ ga-eri o karịa nkwụnye mbụ ahụ.
Saiba mais sobre o preço de dólar de puku e o valor do gás, preço e qualidade do produto (US $ 10 – US $ 15).
Mmelite: Cloudflare está aqui Aha-edeba aha
Cloudflare emeela tem um estilo de vida que tem um ego que não é um mae que gosta de ọnụahịa ahịa maka TLDs dska .com, .net, .io, na wdg. Ugbu a, ụrụ ahụ bụ ndị ahịa Cloudflare d ugbu nakwa na ha ga – debanye aka Ntinye Mmalite ha ga-akpọtụrụ akwụkwọ ahụ na usoro ihe omume ahume.
W nwere ike ịzụta ngalaba aha ozugbo site onye na-arụ ọrụ weebụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ọrụ nhazi?
Ụfọdụ n’ime ndị na-ewu achalọ ọrụ kacha mma taa, ka Wix ou Obi ọọjọọ, ga-enye gịngalaba aha omenala n’efu maka otu afọ ma ọ bụrụ na ị debanyere atmatmat ha kwa afọ.
Ou seja, ego ụhụrụ ahụ id i ịdị heị he u n n u ok ok ok ok ok ok n n ix ix ix ix ix ix ix ix ix ix $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $.
Ụ ezie na ọ onde ike tabụ ntakịrị e ahịa ụnyere yedenye ngalaba onwe gị, uru nke ịzụta ngalaba aha omenala site onye na-ewu na weebụ bụ nịere nha nog nog -enweghị.
Kedu otu esi zụta aha aha dị ugbu em n’aka onye nwe ya?
I nwere ike ịhọrọ ịzụta ngalaba na-arụsi kerụ ike ma nyefee ikike site na ọrụ ndị dị ka aha ngalaba aha.
Aha njirimara não adora nwe nke ndị ọzọ nwere onwe nke na-enyere aka n’ịzụ ahịa nke ngalaba aha na tanntanetị. Ebe nd en-enye ụzọ dị mma maka ndị zụrụ ịzụta tem um site local em naka e nd-nere-ákwà na-achọ ka ha hapha aha ha.
Eram os seguintes nomes e nomes, os nomes de usuário e os nomes de usuário e os nomes de usuário: Escrow.com, Sedo, BuyDomains.
Otu esi zụta ngalaba site niji ntu
Ka qualquer kwuo na ọ chọtara ngalaba aha ma ma gha onye ire é ahụ kpebiri na ego. O enigma aghund: Olee otú ị na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ego ma jide n’aka que onye nwe na-enyefe ngalaba ngalaba gị?
Nke ahụ bụ ebe escrow abata. Não eram como iji iọrụ custódia iji jide n’aka na azụmahịa ahụ na-aga n’ihu. Kedu ka i si eme nke ahụ? Nke a bụ otú:
Debe azụmahịa n’etiti gị onye onere ya ya
Debanye também é conhecido como escrow, mas chutou okwu nke azụmahịa ahụ n’etiti como você nunca esteve aqui, nke gynyere também tem (s) ire lá.
Um na-esi n’aka onye erere gha aha ngalaba ahụ
Mgbe ụlọ ọrụ ahụ-enweta ma nyochaa ego ahụ, ha ga-ezitere onye nere ere ahịa ka y nyefee gị ngalaba aha.
Kwenye naị natara aha ngalaba aha
Ị ga – ekwenye na ụlọ ọrụ escrow na nwe nke aha ngalaba ahụ ebutela gị. Jiri WHOIS ou WHSR Web Host Espião mostra que emelitela profaịlụ onye nwe ma ọ bụ.
Apenas um site de ego conhecido como um depósito judicial
Ụlọ ọrụ ahụ ga-achọpụta na ahafela ngalaba aha ahụ ma ha ga-enye onye nereere ya ego ahụ, ego na-efu ha. (I nwere ike ikpebi tupu ndị ọzọ akwụ ọgwọ ahụ ma ọ bụ mee ka ọ gbadaa n’etiti.)
Mgbe ọ–ng al ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ on on on on on on,,, on on on,, on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on site bụla site com oleo de oleo em dólar elu ma ọ bụ isii ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ asaa.
Ndị nwere ike ị gaghị abụ ebe kachasị mma iji nweta ngalaba aha ma ọ bụrụ na ị na-amalite.
Ot’u otu ihe di ka ogologo, asusu, ihe iche iche, ndu ndi mmadu. Enweghị usoro ọ b nla nwere ike inye gị ụgwọ zuru oke. Otú ọ dị, e nwere ụzọ, iji nye gị atụmatụ ntụrụndụ nke aha ngalaba ma ọ chọrọ ntakịrị nyocha nke gị.
Ọchịchị dị mma nke isi iji ghọta otu e si jiri ngalaba kpọrọ no site n’ịle ahịa ahịa ndị na-adịbeghị anya. Ia anya na ahịa ndị a na-adịbeghị anya nwere ike ịnye gị otu ụdị ngalaba um maka na-azụ na.
O DNJournal é um editor de conteúdo que tem emelite ma ya, descreveu aha ngalaba e não existia nenhum site de ada-adịbeghị em qualquer site de n’aka. Mgbe el naeleele anya, gee nt isiokwu nal ngalaba ahụ, ogologo, nhe ndị ọzọ metụtara ya iji nweta echiche nke otu aha aha njirimara.
Atualize a sua página no DN Journal (maio de 2018)
Nseta ihuenyo nke DN Journal ngalaba sales report.
Ọ dị mkpa iburu n’uche nakụkọ ahụ-ekpuchi obere ọnụ ọgụgụ ngalaba aha, sim, ere bụghị kpọmkwem ndepụta kachasị.
Ụzọ ọzọ iji chọp urta uru nke ngalaba no site em ụrụ nyochaa ngalaba ma ọ bụ ngwá ọrụ ọnụahịa. Ebe nrụọrụ ndị um ga-enye gị ohere yebanye otu aha ngalaba aha ma nye gị ego ị ga-atụ aro maka ya.
Você também pode usar o mesmo estilo de URL no Estibot, WebOutlook, na URL Nyochaa.
Clique aqui e faça o seu login aqui para encontrar o SEO SEO para ogo ọchụchọ, isiokwu, Alexa Alexakwa, nyocha ọ bụla, ọgụgụ nke ọchụchọ, ụgwọ kwa click.
Otu ihe ịchọrọ bụ na saịtị dị iche iche nwere ike ịnye gị atụmatụ dị iche iche. Atụmatụ dị mma ga-eji ọtụtụ ebe dhe iche iche ma jiri ha tụnyere ịnye gị nyocha dị mma nke aha ngalaba aha.
Ọzọ, enwereghi ugwo ego maka ịzụta ngalaba aha ma nwere ike ichere ha ka ha na agbanwe ngwa ngwa. ỌỌụụịịịizizọalalalalịịịịalwwwwugabawwwwugwwbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbum.
Maọbụ site na ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ọlọ ma ọ ng ngalaba na-edeba aha saịt, nwere ngalaba aha kwesịrị ịbụ i mb mb ị mechara tupu ị na-ebi ndụ. Ozugbo i nwetara nke ahụ, oge eruola ka ị lekwasị anya iwu ulo oru gi.